Amashiya abantu: yonke into ofuna ukuyifumana malunga nabo | Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | Ukunyamekela
Ixesha elithile ngoku bekukho impikiswano enkulu malunga namashiya abantu. Omnye wemibuzo ephambili ujikeleze ukumila kwawo: ngaba kufuneka ziyekwe zendalo okanye ngokuchaseneyo zixutywe? Zininzi iindawo zokujonga kwaye zonke zinomdla. Kodwa, ewe, ekugqibeleni nguwe ngokwakho ekufuneka wenze isigqibo esivumelana nawe.
Ngokuqinisekileyo yenye yeempawu ezifumana ukubaluleka ngakumbi kumfanekiso wesilisa. Fumana yonke into malunga namashiya, ukusuka kwindima yabo emzimbeni ukuya kwindlela yokujongana nokunyamekela kwabo:
1 Zintoni iintshiyi?
1.1 Zezona zibalulekileyo ekubonakaliseni iimvakalelo
1.2 Banikela ngokhuseleko emehlweni
2 Kutheni le nto amashiya akho enobuso obungenayo enye?
3 Ukujamelana okanye ukungavumi
3.1 Ukukhupha amashiya amadoda
3.2 Iimveliso zamashiya abantu
Akukho nto emzimbeni womntu obukho bakhe bubangelwa yinto elula yendalo, kwaye amashiya ahlukile. Imiphetho yeenwele ezikhula ngaphezulu kwamehlo zilapha ngaphezulu kokumisela ukubonakala. Kodwa yintoni kanye kanye? Ngokwenzululwazi, imisebenzi yayo yayiya kuba yile ilandelayo:
Zezona zibalulekileyo ekubonakaliseni iimvakalelo
Amashiya anokunceda uziveze kwaye unxibelelane. Ngale ndlela baluphawu olunamandla kakhulu, ukusukela intshukumo elula yebrawuza ngamanye amaxesha icace ngakumbi kunentetho yamagama angamawaka. Ngubani ongakhange aphakamise ishiya ukubonisa ukungathembi? Xa ususa phezulu okanye ezantsi ngaxeshanye, ziyabonisa kwabanye ukuba unomsindo okanye umangalisiwe.
Banikela ngokhuseleko emehlweni
Kodwa iingcali zithi ayipheleli nje ekukhuleni amashiya okubonisa kunye nokunxibelelana, zikwadlala indima ebonakalayo: ukukhusela amehlo ekungcoleni nasekufuma. Umzekelo, nceda uphambukise amanzi emacaleni kwaye ugcine umbono wakho ucacile xa, umzekelo, ubila ebunzi. Kuyabonakala ukuba, oku kuya kulungisa into yokuba amashiya mde kunamehlo.
Kutheni le nto amashiya akho enobuso obungenayo enye?
Ngokubanzi, amashiya amadoda athambekele ekubeni athe nkqo kwaye angqindilili kunabafazi. Kodwa oku akusoloko kunjalo. Kwaye kunjalo, ngokucacileyo, ishiya nganye yahlukile. Ubude, ubukhulu, iarc, kunye nobukhulu zizinto ezizodwa kumntu ngamnye. Umbuzo wemfuza. Njengombala wamehlo, ukumila kweshiya yenye yeempawu ezininzi ezinokudluliselwa zisuka kumzali ziye emntwaneni., kunye nobukhulu okanye umbala.
Kukho iintlobo ezininzi zamashiya. Kwaye abo banikwe ufuzo bakunceda ukuba wazihlule, ke Ukuzama ukulinganisa abanye akunakwenzeka kwaye akunangqondo. Isitshixo kukugxila ekufumaneni olona hlobo lubalaseleyo lwebrawuza yakho ngaphandle kokulahlekelwa zizinto ezizenza zahluke.
Ukujamelana okanye ukungavumi
Lowo ngumbuzo. Ukulungisa amashiya akho yinto nje oyithandayo. Kule mihla kuqhelekile ukuba amadoda alungise amashiya awo ngamaxesha athile. Nangona kunjalo, baninzi abakhetha ukubashiya njengoko benjalo. Kwaye akukho khetho alunganga.
Ukuba ungoweqela lokuqala, kuyacetyiswa ukuba wenze ngokumodareyitha ukuze amashiya alahle ubuncinci bendalo ngexesha lenkqubo. Imfihlelo kukuba ukusebenza kunye ne-tweezers kuphantse kungabonakali. Esi sixhobo sinokuba luncedo kakhulu, kodwa ukusisebenzisa gwenxa kungabeka imbonakalo yobuso bakho emngciphekweni, yiyo loo nto kungcono ukuba usilele kunokuba uye kude kakhulu.
Ekugqibeleni, igama eliphambili apha lilungisa. Ukuba awucingi ukuba kukho nantoni na enokulungisa amashiya akho (umzekelo, ibunzi elingqindilili) okanye ungaphucula oko sele unayo nangayiphi na indlela, kungcono ukuba ungazichukumisi.
Ukukhupha amashiya amadoda
Jonga eli nqaku: Ungazikha njani amashiya akho. Apho uyakufumana indlela yokulungisa amashiya akho inyathelo ngenyathelo ukuze zikhangeleke zendalo.
Iimveliso zamashiya abantu
Ngenxa yomdla okhulayo wamadoda kwimeko yamashiya awo, imarike sele iqalile ukubonelela ngemveliso yokhathalelo lwabo. Ngale ndlela, kufanelekile ukuqaqambisa izinto zokuthambisa ezinje Akukho mveliso ifunyenweyo. Isetyenziselwa ukudibanisa nokulungisa amashiya amadoda. Nangona bengenakho ukubhalwa njengemveliso ekufuneka uyenzile, inyani kukuba banokuba luncedo kakhulu ukuba ufuna uncedo ekubekeni amashiya akho angalawulekiyo endaweni yawo.
Uninzi lwamadoda aludingi kuqhaqho olukhulu.ngakumbi ukuba banelisekile yimilo yabo yendalo (nokuba yeyiphi na). Nangona kunjalo, kuba ayinakuphikiswa into yokuba banobunzima obuthile kwisitayile sakho, kunye nakwimbonakalo oyenzayo kwabanye, kuyacetyiswa ukuba ubahlawule ubuncinci imizuzu embalwa yokuqwalaselwa ngeveki ukuqinisekisa ukuba bayabonakala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Amashiya amadoda